Thenga i-Bitcoin nge E-Laos ngoko nangoko nangokuKhuselekileyo | Paxful
Thenga i-Bitcoin ngoko nangoko ku E-Laos
Asinawo amaxabiso e I-Lao Kip kwi E-Laos okwangoku. Apha ngezantsi ngamaxabiso onganomdla kuwo.
Iindlela zokubhatala eziphambili kwi E-Laos
U-Paxful ukwenza kube lula kwaye kukhuseleke ukuba uthenge nokuba ube nekhriptokharensi. Fumana elona xabiso ligqibeleleyo apha ngezantsi uze uthenge ikhriptokharensi nge I-App ye-Mali namhlanje.
Thenga i-Bitcoin ngo I-App ye-Mali
Nceda abanye abantu base E-Laos bafumane i-Bitcoin uze ufumane iingeniso EZINKULU ezifikelela kwi 60% kwintengiso nganye. Qalisa ukuthengisa ngeakhawunti yakho yebhanki yasekuhlaleni ngoku, jonga isikhokelo sethu sasimahla. U-Paxful ufumana abathengi be-Bitcoin abangama-1000 base E-Laos mihla le.
Unabantu abaninzi obaziyo abafuna ukuthenga i-Bitcoin e E-Laos? Nge Kiyoski yakho ye-Bitcoin nenkqubo yeHlakani ufumana umvuzo we-2% kurhwebo ngalunye ngonaphakade ngokwabelana nje ngelinki. Qalisa ngoku.